musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Italy Kuputsa Nhau » Zuva reWorld Tourism neGoogle
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kurwisa • tsika nemagariro • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Investments • Italy Kuputsa Nhau • misangano • nhau • Kuvakazve • Resorts • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now
Google inorekodha zvinoitika munzvimbo huru dzevashanyi dzakatsvaga paGoogle Mepu muItari neEurope. Panguva yeWorld Tourism Day, iri kupembererwa nhasi, Gunyana 27, 2021, injini yekutsvaga yakagadzira chinzvimbo chevanoenda kuItaly nekuEurope uye vakaita kudzokorodza maturusi uye zvirongwa zvakagadzirirwa kutsigira indasitiri yekushanya.
Kutsvaga kwakatanga kubvira kutanga kwegore kunzvimbo dzinozivikanwa dzevashanyi muItari paGoogle Mepu.
Akanyanya kufarirwa ndeaya: Colosseum, Amalfi Coast, Milan Cathedral, Gardaland, Trevi Fountain, Shongwe yePisa, iyo Pantheon, Piazza Navona, Piazza del Popolo, uye Villa Borghese.
Kana zviri zveEurope zvese, gumi dzakatsvaga nzvimbo dzekushanyira dzinosanganisira 3 muItari.
Kugadzira gumi pamusoro muEurope ndeiyi: Tour Eiffel (France), Basílica de la Sagrada Família (Spain), Musée du Louvre (France), Europa-Park (Germany), Colosseum (Itari), Plitvička jezera (Croatia), Amalfi Coast (Italy), Energylandia (Poland), Milan Duomo Cathedral (Italy), Camp Nou (Spain).
Pamusoro pegore rapfuura, Google yakashanda pamwe neindasitiri yekushanya nekupa ruzivo, zvishandiso zvisina mutengo, uye kudzidziswa kushandisa hunyanzvi hwemadhijitari kutsigira mabhizinesi nenzvimbo dzekushanya kugadzirira uye kujairana neyakajairika.
Mazuva ano, injini yekutsvaga yakaparura zvakare seti nyowani yezvishandiso uye zvirongwa zvekubatsira mabhizinesi ezvekushanya kuti agamuchire nekubatana nevanhu online.
Izvi zvinosanganisira izvo zvitsva zve Google Search kubatsira vanhu kuwana zvinokwezva, marwendo, kana zvimwe zviitiko. Kana vanhu vakatsvaga zvinokwezva, senge iyo Eiffel Tower, module nyowani inoratidzira zvinongedzo zvekubhuka matikiti ekupinda uye dzimwe sarudzo pazvinowanikwa. Iyo sevhisi inowanikwa pasi rose muChirungu, uye vanobatirana vanogona kusimudzira matikiti ekubhuka pasina muripo, zvakafanana nemahara emahotera ekubhuka ma link akaunzwa kutanga kwegore rino.
Chimwe chishandiso ndechekuti zvine chekuita neruzivo rwekuzvipira kwemahotera maererano nekusimudzira zvakananga pagoogle.com/travel. Muchokwadi, izvo zvekutsvaga zvinoratidza kuwedzera kutsvaga kwekuwedzera sarudzo dzekufamba, sekuratidzwa nekutsvaga kwe "eco hotera," iyo yanga iri mukukura kusingagumi kubvira 2004.
Kubva pamwedzi uno, kutsvaga kwezvivakwa zvehotera kunoperekedzwa nechikamu chemashoko chine runyorwa rwezvirongwa zvakaitwa nehotera zvichitsigira kugadzikana uye "eco-Certified" chitambi chiri padyo nezita rechimiro.
Chekupedzisira, Google inopinda mubatanidzwa weTravalyst senhengo inotangisa kubatsira kugadzira yepasi rose uye yakavhurika modhi yekuverenga uye kuona mhepo yekufambisa kabhoni emhepo uye kubatsira kusimudzira zviyero zvakafanana zvehotera. Sangano - rinotungamirwa naPrince Harry, Duke weSussex, uye rakavambwa mukubatana neBooker.com, Skyscanner, Trip.com, uye Visa - harisi purofiti uye rinoshanda kubatsira kuita shanduko kuitira kuti kufamba kwakasimba kuve kwakajairika uye kusisina chete niche.